Magamba echokwadi - The Zimbabwean
Rufuse akaberekwa kuDora Pinto, kumapeto kweMutare. Akasiyira chikoro ari mudanho resekondari panzira paEllis Gledhill kuSakubva achinobatana nevamwe kurwira rusununguko rwenyika kuMozambique muna 1975.
Akashandira kukamba dzeNyadzonia, Zhunda neDoroi uye aiva umwe wevakatanga kuendeswa kuTanzania. Akadzidziswa zvechiuto pakamba yeNechingwenya.
Mushure, akadzoserwa kuMozambique kwaakanobatana nevamwe varwi verusununguko paMavhonde.Muna 1979, akaendeswa kuMaputo kwaakanobatana nemauto emuZANLA aitungamirirwa navaJosiah Tongogara, vaive mukuru wemauto.
“Cde Tongo igamba rechokwadi randinoremekedza. Ndivo vakatiisa patiri nhasi, muZimbabwe itsva, asi zvinosuwisa kuti vakafa zvisina tsarukano. Havana kuita njodzi, zviripo zvakavanzika zvakaitika,” akadaro.
Mushure mekuwana kuzvitonga kuzere, vakatorwa kushandira mauto enyika eZimbabwe National Army senhengo inoshanda mune zvekuongorora nekutsvagurudza zvakavandika. Vakazokwidziridzwa vachipihwa chigaro chaLieutenant muna 1982. Mugore ra1984, vakasiya basa rechiuto nemhaka yekurwadziwa nemaronda avaive vawana muhondo.
Vakadoma Edgar Tekere, Edison Zvobgo, Basil Nyabadza anozivikanwa nekunzi Terrence Tanganeropa, Richard Chauke naStanford Tofa Shamu, anozivikanwa nekunzi Cde Solo Maimbodei, sevarwi vechokwadi verusununguko,”kwete mbavha dziri mubato reZanu (PF).”
“Ndinoremekedza Solo Maimbodei. Ane kodzero yekuradzikwa panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre. Akayanika pachena matambudziko nekushungurudzika kwemagamba echokwadi makore mazhinji nyika yawana kuzvitonga kuzere,” akadaro Rufuse.
“Mugabe atikanganwa iye zvino ari mubishi kudya patafura imwechete nevanhu vanonyepera kuti varwi vehondo, avo vanomuudza zvemanyepo. Ari kuvapa mibairo yevhu, motokari dzakanaka nekuvakwidziridza achivapa zvigaro zvepamusoro muhurumende. Vanhu ivava havamudi zvachose. Vari kutora mukana iwoyu kuba kekupedzisira zvose zvavanokwanisa,” akadaro.
Rufuse anorarama nemari inobva muzvigayo zvake munzvimbo dzeDora Pinto, Zimunya neChigodora, zvigayo izvi akazvitenga nemari yeruremekedzo yaakawana kubva kuchiuto mushure mekusiya basa. Rufuse ndeumwe wevakawana madhora zviuru makumi mashanu mugore ra1998, apo varwi verusununguko vakapihwa mari nehurumende yeZanu (PF).